Haweeney Soomaali ah oo sheegtay in booliska Kenya ka tuuray daar 5 dabaq ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Haweeney Soomaaliyeed oo 5 caruur ah dhashay, ayaa BBC u sheegtay in booliska Kenya ay kasoo tuureen dhisme 5 dabaq ka kooban oo ay ka daganayd Xaafada Islii ee magaaalada Nairobi ee saacimadda dalka Kenya.
Farxiyo Axmed Yaroow, oo ah haweneyda sheegtay in laga tuuray daar dheer ayaa xustay iney ku dhacday Jiingada guri kale oo deris la ahaa daarta dheer ee laga tuuray sida ay tiri. Farxiyo oo gacanteda midig afar meel ka jabtay ayaa hada lagu daweeynayaa isbitaal ku yaala Xaafada Islii.
Haweeneydaan ayaa sheegtay in xilli habeen booliska Kenya ugu galeen gurigeeda, islamarkaana weydiiyeen sharci, markii ay sharciga tustana ay weydiisteen lacag iyo dahad, markii ay ku tiri ma hayana ay ka guriga ka tureen.
“Hal nin ayaa iisoo galay 3 kalena banaanka ayay joogeen, wuxuu i dhahay lacag keen, ma haayaa dhahay, wuxuu i dhahay Dahab keen ma haayaa dhahay, Balakoonkaa Ilmo yar yar iga galeen soo qabsaa maagay kadibna wuu iga soo daba galyaya, waxaan dhahay isii sharcigeyga, kadibna waxa uu iga tuuray dabaqa” ayay sii raacisay Farxiyo oo u warameysay BBC.
Afhayeenka booliiska Kenya, Mascuud Munyi, ayaa sheegay inay arrintaas si aan rasmi ahayn u maqleen, balse ay amar ku bixiyeen in baaritaanno dhab ah lagu sameeyo, waxaana doonaynaa inay arrintan noqoto mid la diiwaan-geliyo.
“Qofka uu falkan oo kale ku dhacay, waxaan ka codsnaynaa inuu si deg-deg ah ula xiriiro laamaha ammaanka si wax looga qabto dhibka loo geystay ama dadka ehelladiisa ay dacwad soo gudbiyaan, si aan innagana baaritaan rasmi ah u sameyno, balse iyadoo aysan dacwad arrintan ku saabsan oo rasmi ah aysan nasoo gaarin ayaan amar ku siinnay madaxda booliiska deegaankaas inay baaritaan ku sameeyaan,” ayay Mascuud Munyi.
Farxiyo ayaa noqonaysa haweeneydii labaad oo Soomaali ah oo sheegtay in ciidamada Kenya ay dabaq kasoo tuureen tan iyo markii uu howlgallada ka socda xaafadda Islii ay billowdeen, kuwaasoo Soomaalida lagu bartilmaameedsanayo.
Dhamaadkii bishii hore ee April ayaa haweeney Soomaali ah oo lagu magacaabo Nadiifo Cabdi waxey sheegtay iney kasoo dhacday dabaq 3 biyaano ah, iyadoo dooneysay iney ka dhuumato booliska Kenya oo saqdii habeenimo guriga ay degantahay ugu garaacay si ay u xiraan.